Manomboka anio ka hatramin’ny faran’ny herinandro, miatrika ny fanadinana hifindrana kilasy ny mpianatra tsy hanao fanadinam-panjakana ho an’ny sekoly tsy miankina. Ny faran’ny volana vao hitsahatra tanteraka ny fampianarana ho an’ny taom-pianarana 2018-2019. Mbola nandoa saram-pianarana volana aogositra avokoa ny ankamaroan’ny sekoly. Efa manentana ny ray aman-dreny sahady hanao famandrihana ho an’ny taom-pianarana 2019-2020 koa ny mpiandraikitra amin’izao fotoana izao. Mahatsiaro ho mavesatra ireo ray aman-dreny amin’ny vola mivoaka satria ankoatra ny saran’ny famandrihana, mbola eo ny frais généraux sy ny fiantohana hefaina mialoha ny fidirana ny volana oktobra ho avy izao. Ny fitaovam-pianarana tsy maintsy vidiana tsikelikely hatramin’ny fidirana.
Hahazo erika sy rivotra ny faritra Analamanga, indrindra ny ilany atsinanan’ny afovoan-tany, anio miaraka amin’ny andro manjombona. Ny tapakandro hariva, handrahona ny andro ary hitohy ny rivotra. Ny maripana, manodidina ny 11°C sy ny 21°C mandritra ny tontolo andro. Hisava ny andro manjombona, rahampitso ary hitohy hatramin’ny alarobia.
Ho an’ny ilany atsinanana, ho avy ny orana fa hitsahatra kosa rahampitso ankoatra ny any Analanjirofo. Mbola ao anatin’ny vanim-potoana ririnina isika, amin’izao fotoana izao hatramin’ny fiafaran’ny volana. Mivadibadika ny maripana sy ny toetry ny andro ka mila mailo, indrindra ireo manana olana amin’ny taovam-pisefoana.
Hisantatra ny BEPC katolika ny sekoly miankina amin’ny fiangonana katolika, ny alatsinainy 19 aogositra ka hatramin’ny alakamisy 22 aogositra ho avy izao. Fotoana hitsapan’ny mpiadina ny fari-pahaizany sy hanitsiana ny lesoka izany. Ho an’ny CEPE katolika farany teo, misy ny sekoly efa nahavita ny fitsarana sy namerina ny kopia teny amin’ny mpiadina, tsara ny vokatra amin’ny ankapobeny, hoy ny mpampianatra.